🥇 ▷ Boqortooyada Imaatinka Dhaarta 2 ayaa adeegsan doonta CryEngine, taageero mod ayaa dhowaan imaan doonta PC ✅
Boqortooyada Imaatinka Dhaarta 2 ayaa adeegsan doonta CryEngine, taageero mod ayaa dhowaan imaan doonta PC
Mid ka mid ah ciyaarahaas oo dhawaan lagu soo daray Xbox Game Pass waa Boqortooyada Imaatinka: samatabbixinta. Dhex-dhexaadintii RPG ee ku muransanayd sixirka iyo awoodaha, waa mid ka mid ah soo-jeedinta ugu waaweyn ee laga heli karo buugga ‘Xbox One’. Waxaa soo saaray istuudiyaha madaxa banaan sida Warhorse Studios, guusha la helay waxay ku dhiirigalinaysaa inay sii wataan shatigaan. Dhab ahaantii, waxay horeyba ugu jiri lahaayeen horumarka Imaatinka Boqortooyada: Difaaca 2, kaas oo isticmaali doona isla mashiinka garaafka isku midka ah, CryEngine.
Wareysi lala yeeshay Tobias Stolz-Zwilling, oo mas’uul ka ah isgaarsiinta daraasadda, wuxuu yiri marka la eego horumarinta cinwaanka cusub, uma baahnid inaad beddesho mashiinka garaafka ee loo adeegsaday kii hore. «Ma qorsheyneyno inaan wax uun iska beddelno maxaa yeelay waxaan abuurnay aalado iyo waxyaabo badan oo mashiinkan ah si aan ula qabsanno», Go’aanka in la ilaaliyo maxaa yeelay «Bedelaada waxay macnaheedu noqon kartaa laga bilaabo xoqidda». Iyada oo tan lagu jiro, waa la xaqiijin lahaa arrintaas Boqortooyada Imaatinka Dhaarta 2 ayaa adeegsan doonta CryEngine. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira horumarin ku xeeran Badbaadiye Boqortooyada Kaalay laxiriirta ikhtiyaarka cusub si loo abuuro waxa ku kooban bulshada, iyada oo loo marayo taageero rasmi ah oo loogu talagalay mods ciyaarta.
Mid ka mid ah dhinacyada sheeko xariiqda ee la xaqiijiyay waa imaatinka taageerada mods-ka Boqortooyada Kaalay: Badbaadin. Waa ikhtiyaar u oggolaanaysa dadka isticmaala inay abuuraan waxyaabaha ay iyagu iska leeyihiin. Stolz-Zwilling wuxuu faallo ka bixinayaa in taageeradani tahay waxa ugu dambeeya ee ay dabooli doonaan Boqortooyada Kaalay: Badbaadi, iyadoo la siinayo qalab adeegsadayaasha Waxay abuuri karaan waxyaalahooda “, halkaas oo xitaa suuragalnimada abuuritaanka ergooyin cusub la kashifay. Warhorse Studios ayaa xaqiijinaya in taageeradani ay gaari doonto isticmaaleyaasha PC-ga, oo laga awood siinayo Steam Workshop. Ku wareegsan imaatinkiisii ​​consoles, waayo hadda ma xaqiijin kartid taas Badbaadiye Boqortooyada Kaalay ku dar taageeradan loogu talagalay mods. Hadda, daraasadda waxay xaqiijinayaan taas “Ma ahan inaanan dooneynin inaan helno, laakiin Microsoft iyo Sony ma aysan aqbalin inay wax qabtaan weli.”. Tan, su’aasha ayaa weli ah inay mustaqbalka taageeri karaan mods-yada loo yaqaan ‘consoles’, laakiin hadda ma xaqiijin karaan waxna.
Imaatinka Boqortooyada: Badbaadinta waxaa laga heli karaa labadaba Xbox One, sida Playstation 4 iyo PC, ahaanshaha qayb ka mid ah buugga diiwaanka ciyaaraha Xbox Game Pass.